Wasiirka Boostada DFS oo Caabudwaaq ka daahfuray Adeegyo lagu horumarinayo isticmaalka Teknolojiyadda (Sawiro) – Radio Daljir
Wasiirka Boostada DFS oo Caabudwaaq ka daahfuray Adeegyo lagu horumarinayo isticmaalka Teknolojiyadda (Sawiro)
Oktoobar 22, 2019 10:58 b 0
(Caabudwaaq – Oktobar 22, 2019) Wasiirka Boostada Isgaarsiinta & Teknoolojiyadda ayaa ka daahfurey adeegyo lagu horumarinayo isticmaalka Teknolojiyadda Xarunta Faraca Jaamacadda Ummadda ee Magaalada Caabudwaaq.
Adeegyadan lagu horumarinayo isticmaalka Teknolojiyadda ee Jaamacadda ayaa waxaa ka mid ah soo gelinta khad Internet ah oo ay isticmaali karaan maamulka, macalimiinta iyo ardayda jaamacadda; Dhisimaha shabakadda Gudaha (Network) ee Jaamacadda; Waxaa sidoo kale qeyb ka ah adeegyadan 39 Laptops iyo Computers iyo Printers cusub oo tayo sare leh.
Hirgelinta adeegyadan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah maktabakad elektroonik ah (Digital Library) ay ku jiraan buugaag, casharo maqal iyo muuqaal ah & maqaalo cilmi ah, qorshaha ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah tababarro loo samayn doono shaqaalaha teknoolojiyadda Jaamacadda iyada oo xoogga la saarayo sidii loo abuuri lahaa koox hawlwadeenno ah oo ku filan horumarinta iyo maamulka agabka lagu wareejiyey jaamacadda.
Munaasabadda daahfurka oo si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa waxaa ka soo qeyb galay Ardeyda, macalimiinta iyo maamulka Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed faraceeda Caabudwaaq, Gudoomiyaha Jaamacadda Ummada Soomaaliyeed, Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex, Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan, Maareeyaha Mashruuca Taakulaynta Isgaarsiinta ee Wasaaradda, ganacsato iyo Maamulka Degmada.
Gudoomiyaha Jaamacadda Ummadda Prof. Maxamed Axmed Jimcaale ayaa uga mahadceliyay Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyadda ka dhabaynta balanqaadkii uu u sameeyey Jaamacadda Ummadda, waxa uuna qirey in adeegyadan ay baahi weyn u qabtey Jaamacadda ayna yihiin adeegyo si toos ah u saameynaya tayada waxbarashada Jaamacadda.
Xildhibaan Cabdi Faarax Xasan iyo Senator Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay sidoo kale u mahadceliyeen wasaaradda, waxa ayna ku adkeeyeen Maamulka iyo Ardayda Jaamacadda in ay ka faa’iideystaan qalabka iyo addeegyadan laga hirgeliyey Jaamacadda.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta & Teknolojiyada, Md. Eng Cabdi Cashuur Xasan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in adeegyadan ay yihiin kuwo bilaw ah oo asaas u ah horumarinta Jaamacadda laguna dul dhisi doono mustaqbalka adeegyo kale oo ka horumarsan. “Ujeeddada Adeegyadan ayaa ah in ay ka qeyb ka qaataan tayeynta Maamulka Jaamacadda, cilmibaarista iyo tayada waxbarashada, adeegyadan waxa ay ardayda u suurtogelin doonaan in ay helaan maktabad ballaaran oo aan u baahneyn internet oo ka caawin karta cilmibaarista iyo aqriska dheeriga ah,” ayuu yiri wasiirka oo intaasi ku daray in adeeggani uusan ku koobneyn Jaamacadda Ummadda faraceeda Caabudwaaq balse ay wasaaraddu hore u hirgelisay mashruucyo lamid ah oo loogu talogalay tayeynta Isticmaalka tiknolojiyadda ee waxbarashada sare.
Wasiirka ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay Mashruuca Taakuleynta Isgaarsiinta ee Wasaaradda iyo Shabakadda Cilmibaarista Tacliinta Sare ee SomaliREN oo kala shaqeeya wasaaradda sidii loo tayeyn lahaa Isticmaalka Tiknolojiyadda ee Waxbarashada Sare ee dalka.